20ka Goobood ee ugu Fiican ee Daawashada Lacag-la'aanta ah 2022 - Circle Wealth
Bogga ugu weyn 20ka Goobood ee Daawashada Bilaashka ah ee ugu Fiican 2022
Isha sawirka: troypoint.com
Ma tahay qof filim jecel oo had iyo jeer raadiya habab cusub oo lagu daawado filimada bilaashka ah? Hadday arintu sidaas tahay, waanu kaa daboolnay!
Waxaan taxnay dhammaan mareegaha ugu wanaagsan oo leh tiro badan oo uruurin filimaan xiiso leh oo ku jira hagahayaga.
Qaybta ugu fiican ayaa ah in shabakadahani aysan ku dalbanayn inaad saxiixdo marka hore, si aad u geli karto goobta oo aad bilowdo inaad ku raaxaysato daawashada waxyaabo yaab leh isla markiiba!
Su'aalaha soo socda ayaa ku hogaamin doona.
Baadhid: 15ka Apps ee ugu Wanaagsan ee Daawashada Raadiyaha 2022 | Aasaasayaasha iyo Saldhigga Isticmaalaha
Waa maxay macnaha Streaming?
Socodsiinta waxa loola jeedaa wax kasta oo nolol ah ama qoraal kasta oo warbaahin ah oo lagu kala qaado intarneedka oo dib loogu ciyaaro kombayutarada iyo aaladaha gacanta.
Agabka daawashada waxaa ku jiri kara podcasts, webcasts, filimada, taxanaha TV-ga, iyo fiidyaha muusiga.
Hubi Sidoo Kale: 10 Aaladaha Streaming Music ugu Fiican Sanadka 2022 | Faallooyinka ugu Fiican
Sidee buu u shaqeeyaa qulqulka?
Muusiga, muqaalka, iyo noocyada kale ee hantida warbaahinta waa la sii habeeyey waxaana lagu soo diraa xidhmooyin xog xidhiidhsan si aad isla markaaba ugu shubto.
Waxay si toos ah meesha uga saarayaan faylalka warbaahinta marka aad ciyaarto, si ka duwan kuwa la soo dejiyo ee lagu kaydiyo qalabkaaga.
Tani waxay ka dhigan tahay xawaarihiisa xawaarihiisu sareeyo oo xasiloon iyo sidoo kale aad u degdeg badan, ha ahaato helitaanka ama xubin ka noqoshada adeega ama appka, iyo sidoo kale aaladaha ku haboon ayaa ah waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad u shubto.
Arag sidoo kale: 23 Barnaamijyada Streaming ugu Fiican Xbox mid ka mid ah 2021 -ka
Waa maxay Streaming Live?
Socodka tooska ah waa baahinta dhacdo waqtiga dhabta ah ee internetka. Noocyada ugu caansan ee baahinta tooska ah waa bandhigyada abaal-marinaha, ciyaaraha, ciyaaraha feerka, ciyaaraha fiidyaha, iyo munaasabadaha hal mar ee gaarka ah, oo leh mowduucyo soo kordhay waligood.
Waxaad ku qulquli kartaa shabakadaha xidhiidhka bulshada iyo kuwa kale, wax walba laga bilaabo dhacdooyinka caanka ah, dalacsiinta, iyo qulqulka nolosha ilaa isticmaale-ilaa- isticmaalaha.
Waxaad si toos ah ugu baahin kartaa talefanka casriga ah, tablet-ka, TV-ga, kombayutarka, ama konsole-ka ciyaarta oo leh xidhiidh xawaare ku filan leh.
Arag sidoo kale: 10 Filim oo Bilaash ah Xbox One 2022 | Ka Hel Dhammaan Lacag La'aan
Waa maxay qaar ka mid ah aaladaha qulqulka ee aan haysano?
Waxaa jira aalado kala duwan oo suuqa ku jira, mid walbana wuxuu leeyahay hawlihiisa gaarka ah.
Waxaa jira qalab qulqulaya qof walba, haddii aad rabto beddelka gacma-la'aanta, kaydin badan oo gudaha ah, wax dhaqaale ah, ama gelitaanka 4K.
Tixgeli waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin console-ka ciyaarta ama sanduuqa ugu sarreeya ee bixiyaha TV-gaaga oo raadi dib u eegisyada shirkado la aamini karo.
Fios TV One waa mid awood badan leh oo leh codka kontoroolka iyo is dhexgalka Netflix si aad u hesho waxaad rabto inaad dhaqso u daawato - oo ay ku jiraan bandhigyada xulashada 4K HD haddii aad leedahay Fios.
Hadda, aan eegno goobaha ugu fiican ee bilaashka ah ee laga heli karo agagaarka:
Shabakadda WatchFree, sida magacaba tilmaamayo, waxay kuu adeegaysaa filimaan iyo taxane TV oo badan oo aad ku raaxaysato adoon saxiixin ama bixin wax lacag ah.
WatchFree waxay ku jirtaa adeeggaaga haddii aad raadinayso filim jacayl ama bandhig tv-ga xiisaha leh si aad maskaxdaada u afuufo.
Uma baahnid inaad soo marto dhibaatada abuurista akoon ama ku biirista; si fudud u gal mareegaha oo ku raaxayso tayada Qeexida Sare ee nuxurka iyo cusboonaysiinta caadiga ah ee xilliyada cusub iyo sii deynta filimada.
Looma baahna in la saxiixo, mana jirto wax dhib ah! Soap2day waa degel heersare ah oo aad ka daawato majaajilo iyo filimaan madadaalo iyo xiiso leh.
Waxaa laga yaabaa in dhadhankaagu maalinba maalinta ka dambaysa is beddelo, laakiin ha welwelin; Mareegahayaga ayaa ku siinaya dhammaan maaweelada aad rabto, waana bilaash.
Waa shabakad mar walba la jecel yahay sababtoo ah had iyo jeer waxay ku cusboonaysiiyaan sii deyno cusub si aad ugu raaxaysato.
Waxay ku siinaysaa awood aad ku raadiso sida saxda ah waxa aad raadinayso, ilaa ta ugu yar. Si aad u dejiso oo aad u dejiso, si fudud u gal oo ka dooro noocyada kala duwan ee xulashooyinka ay bixiso Soap2Day.
Vumoo waa shabakad caan ah oo bilaasha ugu keenta dadka caanka ah ee caanka ah aaladahaaga.
Qaybta ugu fiican ayaa ah in ay waxaas oo dhan samayso iyada oo aan looga baahnayn in aad diiwaan geliso akoon ama aad bixiso wax lacag ah, taas oo haddii kale kaa ilaalinaysa inaad si buuxda ugu raaxaysato naftaada. Waxay ku siinaysaa inaad gasho dhammaan filimada iyo bandhigyada telefishinka ee laga heli karo warshadaha warbaahinta.
Websaydhku ma laha filtarrada nooca badan, laakiin waxa ay haysaa macluumaad badan oo ku saabsan agaasimayaasha, dhererka orodka, iyo qiimaynta filimada.
Mawduuca tayada sare leh iyo helitaanka fudud ee degelku waa laba ka mid ah sababaha badan ee uu caanka ku yahay oo inta badan la isticmaalo.
Waxay ugu horrayn ugu talagaleen M4Ufree si aad uga faa'iidaysato maktabadda nuxurkeeda ballaaran, oo ay ku jiraan filimaan, filimaan, filimaan, majaajillo, iyo qaar kaloo badan.
Naftaada ku raaxayso oo ka faa'iidayso dhammaan mareegaha ay bixiso adiga oo aan lagu joojin xayaysiisyada ama pop-upka.
Xulashooyinka badan ee shabakada ee sii daynta cusub, kuwa ugu caansan, iyo tusmada kor ku xusan ayaa sahlaysa sahminta. Intaa waxa dheer, waxay noocyada u qaybiyaan ficil, jacayl, iyo majaajillo, si aad u hesho wax ku habboon niyaddaada.
CMoviesHD waa inay noqotaa mid ka mid ah shabakadaha ugu fiican ee lagu helo filimada iyo bandhigyada TV-ga bilaashka ah. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad daalacanto, soo dejiso, oo aad daawato fiidiyowyada bilaashka ah adigoon isdiiwaangelin.
Waa adeeg loo dhan yahay oo ay ku jiraan noocyo badan oo nooc ah, muuqaal qeexid sare ah, iyo daawashada xad dhaafka ah ee habeenkii.
Waxaas oo dhami waxay kuu fududaynayaan inaad ku dhiirato bandhigyada tv-ga ee ku raaxaysiga dembiilenimo ama aad ka hesho xiisahaaga filimada cabsida leh.
Sababtoo ah si wanaagsan ayaa loo jecel yahay oo leh qiimeynta daawadayaasha sare, shabakadu waa beddelka ugu fiican ee madadaalada bilaashka ah oo aan saxiixin.
6. Haa Filimada
YesMovies waxay kaa caawinaysaa inaad go'aansato waxaad daawato adoo siinaya filimo iyo muuqaalo muuqaal ah oo filimo iyo bandhigyo telefishin ah oo laga yaabo inaad ku raaxaysato.
In kasta oo ay jiraan soo-bandhigyo khayaali ah, waa beddel cajiib ah oo dhan walba ah oo si degdeg ah loogu heli karo waxyaabo badan oo warbaahin ah oo ka kooban dhammaan noocyada.
Waxay ku siinaysaa macluumaadka sida faallooyinka filimada, taariikh nololeedka jilayaasha, noocyada, tayada nuxurka, iyo faahfaahinta kale si ay kaaga caawiso inaad doorato waxaad daawato. YesMovies waxay ku dabooshay lacag la'aan, haddii aad door bidayso Hollywood ama Bollywood.
7. Xiddigaha Filimada
Shabakadda MovieStars, oo u keenta xiddigaha filimada nolosha aaladaha aad ugu jeceshahay, ayaa muddo dheer ahayd goob aad loogu daawado filimada iyo qaybaha TV-ga.
Waxa ay ka kooban tahay noocyo badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan majaajillada jacaylka ah iyo kuwa xiisaha leh, iyo sidoo kale barnaamijyo caalami ah.
Ma jiraa filim Faransiis ah oo cusub ama dukumeenti Nederlaan ah oo dareenkaaga soo jiitay? MovieStars waa kuu furan tahay Waxa kale oo ay si joogto ah u cusboonaysiisaa waxa ku jira si ay u ahaato mid joogto ah.
8. Filimka Los Movies
Shabakadda LosMovies, waxay leedahay agaasimeyaal kala duwan, noocyo, jilayaal, qiimeynno, xulashooyin sare, iyo astaamo kale, waxay u oggolaaneysaa macaamiisha ama daawadayaasha inay dhex galaan badweyn filimaan iyo goos goos ah majaajillo xaaladeed oo aad ku daawan karto lacag la’aan adigoo raaxadaada ku raaxaysan. guri u gaar ah.
Goobaha qaarkood waxay u baahan doonaan inaad farta kor u qaaddo ka sokow riixista ciyaarta si aad u daawato filimada khadka tooska ah, halka LosMovies aysan dhab ahaantii samayn.
Maaddaama ay si degdeg ah u geli karto iyo dhex-socod-la'aan-la'aanta iyo ku-kordhinta server-yada badan ee adeeggaaga, degelku waa caan waana ikhtiyaar aad u fiican oo madadaalo iyo nasasho leh, oo leh madadaalo wanaagsan oo ay bixiso ganacsiga warbaahintu.
Ma jiraan wax soo baxay, xayaysiisyo, saxiix-ups, xisaabo, ama waxyaabo kale oo dhibsado-kaliya filimaan duug ah, fadhiyo, filimaan, iyo barnaamijyo sugaya in la ogaado oo la hubiyo. Miyaanay u muuqan wax khiyaali ah?
LookMovies waxay halkan u joogtaa inay rabitaankaaga ka dhigto mid dhab ah adoo ku siinaya xulasho kala duwan oo ka kooban. Gal website-ka oo baadh xulashada aan dhammaanayn ee alaabta la heli karo.
Sidoo kale su'aal kama taagna in ururinta ay ka muuqan doonto dhammaan sii daynihii ugu dambeeyay ee adiga kugu habboon si aad ugu raaxaysato ku habboonaanta gurigaaga.
YoMovies waa mid ka mid ah mareegaha ugu sarreeya ee bixiya waxyaabo bilaash ah oo aan saxiixin oo noocyo badan ah oo aad gacmahaaga ku heli karto, taasoo ku siinaysa ikhtiyaar u dhexeeya baahinta wararka aan dhammaanayn ee ma aha Hollywood kaliya laakiin blockbusters Bollywood si aad u hesho mojo-kaaga. .
U daadi dhammaan filimada, taxanaha, iyo fadhi-ku-tiriska aad ka fakari karto, dhammaan bilaasha oo aan lahayn xayaysiis xun oo faragelinaya xad-dhaafka wanaagsan.
Ku raaxayso qulqulka aan xadidnayn adoon lagu joojin dib u jiheynta, soo-bandhigista, ama xayaysiisyada wax u dhimi kara raaxaysigaaga - taasi waa waxa Afdah kuu hayo.
Waa saaxiibtinimo isticmaale sababtoo ah waxay leedahay filimaan iyo bandhigyo telefishin oo aad u tiro badan oo loo qaybiyay noocyo si ay kaaga caawiyaan doorashada nooca madadaalada ee aad door bidayso.
Ku xooji aaladaha aad jeceshahay oo u diyaari in lagu maaweeliyo wax kasta oo warshadaha madadaalada ay ku bixiyaan Afdha.
StreamM4u waxay halkan u joogtaa inay kaa caawiso inaad gasho maskaxda ku raaxaysiga daawaynta bilaashka ah adigoo ku siinaya dhawr doorasho. Waxay ku siinaysaa doorashada server-yada keena alaab tayo sare leh.
Haddii mid ku guuldareysto, waxaad u bedeli kartaa kan kale adigoo hal gujin. Kuma soo wacayso inaad isdiiwaangeliso ama samaysato akoon, sidoo kale kuma soo wacayso inaad sameyso wax aan ahayn inaad gujiso ciyaarta.
Had iyo jeer waa la cusboonaysiiyaa dhacdooyin cusub iyo sii deyno cusub, waana doorasho aad u wanaagsan marathon-ka filimada iyo xad-gudubyada TV-ga.
Waligeed ma fududayn in lagu daawado filimada online-ka WatchMovieStream waxay ku siinaysaa macluumaadka ku saabsan qiimaynta filimada, agaasimayaasha, tayada filimada, noocyada iyo jilayaasha.
Faa'iido kale oo cajiib ah ayaa ah in ay bixiso gole isgaarsiineed oo lala yeesho dadka jecel barnaamijyada filimada ama telefishanka.
Waxay ku siinaysaa ikhtiyaarka daawashada trailer-yada websaydhka laftiisa, ma jiho, sidoo kale waxay bixisaa ikhtiyaarka server-yo badan si haddii mid uu noqdo mid aan la heli karin, waxaad had iyo jeer u beddelan kartaa mid kale oo ku siin doona khibradda madadaalada ee aad rabto.
FlixTor waa doorasho aad u fiican oo loogu talagalay baahinta aflaantii ugu dambaysay iyo qaybihii ugu dambeeyay iyada oo aan la joojinayn xayeysiisyada iyo soo-bandhigyada, iyo sidoo kale wax dhib ah oo is-diiwaangelin ah.
Daawo wax kasta oo uu mareegaha ku bixiyo lacag la'aan, kuwaas oo ay ku jiraan noocyo kaa farxin doona oo kaa nixi doona, iyo sidoo kale noocyada ku dhufan doona laftaada qosolka leh.
FlixTor waa kuu sax adiga, iyadoon loo eegin waxaad raadinayso. Way fududahay inaad tagto bogga internetka, adoo eegaya xulashada ilaa aad ka hesho mid aad jeceshahay, ka dibna riix badhanka ciyaarta.
Tilmaamahan ayaa ka dhigaya adeeg aad loogu taliyay, waana inaad hubisaa haddii aad rabto inaad ku shubto bilaash iyo dhib la'aan.
Websaydhka hodanka ku ah Movie4u wuxuu bixiyaa helitaan bilaash ah oo muuqaal tayo sare leh oo u dhexeeya taxane shabakad iyo bandhigyo telefishan ilaa fadhiyo iyo dokumentiyo.
Waa shabakad si fiican loo jecel yahay oo sumcad leh oo bixisa xulashada server-yada iyo helitaanka aan xadidnayn ee nuxurka aad dooratay.
Socodku waa bilaash oo xannibaad la'aan, diiwaangelintu waa ikhtiyaar, maaha qasab. Waa isticmaale saaxiibtinimo waana sahlan tahay in lagu shaqeeyo, iyadoo si wax ku ool ah ku siinaysa filimada adiga oo aan dadaal lahayn.
Waxaad isticmaali kartaa aaladaha IOS ama Android, Laptop, tablet, ama telefishinka smart si aad u daawato.
Crackle waxa ay u ogolaataa isticmaalayaasha in ay si bilaasha ah ugu shubaan muqaalka qalab kasta iyada oo aan la joojin xayaysiisyada
Waa mid ka mid ah adeegyada ugu caansan ee daawashada bilaashka ah, mana jirto baahi loo qabo in la diiwaangeliyo.
Markaa waxaad si fudud uga dhex baadh kartaa fursadaha hodanka ku ah nuxurka weyn ee ay bixiso, hel waxaad jeceshahay, oo si toos ah u geli madaddaalada filimka.
5filimyadu waxay halkan u joogaan inay ku siiyaan qulqulka xawliga sare leh iyo madadaalada cajiibka ah.
Websaydhku waa sahlan tahay in la dhex maro oo waxa ay siisaa gelitaanka filimo iyo taxane telefishan oo kala duwan oo noocyo kala duwan ah.
Marka, wax kasta oo niyaddaadu tahay maalintaas, waxaad ku xisaabtami kartaa 5 Filim si aad u keento khibrad cajiib ah oo leh tayada sare, waxyaabaha ka kooban wax-ka-qabashada, kuwaas oo dhammaantood ah hal gujin oo keliya.
PopcornFlix waa mid ka mid ah adeegyada baahinta bilaashka ah ee ugu caansan, iyo dhammaan sababaha saxda ah.
Ma waxaad raadinaysaa waxyaabo tayo sare leh? Hubi. Daawashada adigoon isdiiwaangelin? Hubi.
Ma jiraan wax soo baxay oo dhibsado? Hubi. Noocyo kala duwan oo filim iyo noocyo telefishan ah oo laga soo xusho? Hubi. PopcornFlix waxay leedahay wax walba si ay madadaaladaada uga dhigto mid sax ah - madadaalo iyada oo aan dhib lahayn.
Dhowr qof ayaa aad u soo jeediyay website-ka, kaas oo leh sumcad aad u wanaagsan iyo kalsoonida dadka. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad soo qabsato salool oo aad isla markiiba quusto.
Shabakadda Putlocker, oo ka mid ah kuwa ugu da'da weyn uguna wax ku oolka badan warshadaha, ayaa bixiya waxyaabo tayo leh oo heersare ah oo noocyo kala duwan leh, oo lagu habeeyo qiimaynta, dookhyada, talooyinka, agaasimayaasha, iyo hawl-wadeenada.
Aad bay u fududahay in la isticmaalo oo la galo, mana bixiso kaliya qulqulka bilaashka ah laakiin sidoo kale soo dejiso si loo daawado.
Ma waxaad raadinaysaa majaajilo kaa qosli doonta oo aad neefsan kari waydo, mise jacayl ku qotoma goob hore? Waxaa laga yaabaa inaad ku raaxaysato ficil ama xamaasad, ama waxaad noqon kartaa jacayl heer sare ah.
VexMovies waxay leedahay dhammaan noocyada nooca aad ugu jeceshahay. Waxay hodan ku tahay nuxurka waxayna ku siinaysaa dhammaan madadaalada aad rabto si sahlan oo loo heli karo oo aan loo baahnayn inaad saxiixdo.
Waxaad ka heli kartaa filim adiga oo u raadiya nooc ahaan, sanadka la sii daayay, ama jilayaasha ka soo muuqday, waxayna si toos ah ugu gudbin doonaan albaabkaaga.
Tani, waxaad haysataa ikhtiyaaro kala duwan oo aad ku daawato daawashada dhammaan filimada ugu fiican ee gadaal-u-celinta ah iyada oo aan wax dhib ah ku jirin isticmaalka mareegaha sare ee la cayimay oo aan dalban wax saxiix ah.
Websaydhyadani waxay bixiyaan dhammaan macluumaadka bilaashka ah wax lacag ahna kuma qaadaan!
20ka Goobood ee ugu Fiican ee Daawashada Filimada tooska ah ee bilaashka ah iyada oo aan la saxiixin 2021
Source source: https://centralviral.com/wp-content/uploads/2020/09/free-movie-streaming-sites.jpg
10 Kalluunka Ugu Qaalisan Adduunka 2022 -ka
Maxaad ka taqaanaa kalluunka deegaankaaga ama adduunka oo dhan? Ma la socotaa in…
Weligaa ma maqashay magaalada loo yaqaan xilli barafka? Gobolka Cagaaran oo ay dadku aad ugu badan yihiin…
Dadku waxay u baahan yihiin deyn shaqsiyeed sababo badan dartood. Marka baahidaasi timaado, tallaabada ugu horreysa waa…
Haddii aad isku deyeyso inaad ku banayso iPhone -kaaga, nadiifi shaashadda gurigaaga, waqti yar ku qaad…
15 Kaararka Deynta Ugu Fiican ee Ardayda Kulliyadda 2021 -ka